बिहीबार भगवान विष्णुको पूजा, व्रत बस्दा के फल प्राप्ति हुन्छ ? (पूजा विधिसहित) – " कञ्चनजंगा News "
No Comments on बिहीबार भगवान विष्णुको पूजा, व्रत बस्दा के फल प्राप्ति हुन्छ ? (पूजा विधिसहित)
बहिनीले उनीहरुलाई धन प्राप्तिका लागि बिहीबारको व्रत बस्न सुझाउँछिन् । त्यसपछि रानी र उनका दासीहरु बिहीबारको दिन व्रत बस्न थाल्छन् । व्रत बस्न थालेदेखि फेरि दरबारमा सम्पत्ति थुप्रिन थाल्छ । दरबारमा सुख मिल्न थाल्छ । परदेश गएका राजा पनि फिर्ता आउँछन् । त्यसैले बिहीबारको दिन व्रत बसेको खण्डमा सम्पत्ति तथा वैभव प्राप्त हुने जनविश्वास छ ।
← बाहुनसंग बिहे गरेर दुख पाएँ, अब दलित संग गर्छु- मिना ढकाल → ६ वर्षको मेहनतपछि २० इन्चको कम्मर (फोटो फिचर)